१८ सी.डी. ४ को यात्रा
मलाई उडेरभन्दा गुडेर यात्रा गर्न खुबै मन पर्छ । विद्यार्थी छँदैदेखि म देश–देशावर घुम्ने कुरामा निकै सोख राख्थें । सन् १९७९ मा २६ वर्षे उमेरमा म नेपाल आएको थिएँ, भारत हुँदै गाडी यात्रामा ।
ठ्याक्कै तीस वर्षअगाडि बलिउडमा पाइला राखेका थिए, अक्षयकुमारले । फिल्म थियो, ‘आज’ । मुख्य भूमिकामा राज बब्बर र स्मिता पाटिल थिए, अक्षय त एकै छिन झुल्किने मात्र ।
अली जत्तिकै बोल्ट
मोहम्मद अली जत्तिको खेलाडी विश्व खेलकुदले देखेको छैन भनिन्छ । यस्तो भन्नुपछाडि यी बक्सिङका खेलाडी रिङभित्र मात्र सफल थिए भन्ने होइन ।
किन आयो जासुसी विमान ?
साउन ५ गते बिहान । एउटा दुर्लभ स्पाई (जासुसी) सोभियत जहाज काठमाडौंको आकाशमा देखियो । नेपाललाई बाँकी विश्वसँग हवाईमार्ग मार्फत जोड्ने एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा त्यस बिहान ६ नबज्दै यो अवतरण हुन खोज्दै थियो, तर सकेन ।
अदृश्य इन्जिनियरको जीवन–चित्र
अलग अनुसन्धान । अलग विषयवस्तु । उनको र मेरो बाटो अलग । तैपनि, एक अपरिचत इन्निनियरको अतीत खोज्दै हिँडेँ ।
विश्व हेर्ने अर्थ–राजनीतिक दृष्टि
लेखक रुचिर शर्मा अमेरिकी प्रसिद्ध लगानी व्यवस्थापक र लगानी बैंक मोर्गन स्टानलेको उदीयमान बजार तथा विश्व लगानी रणनीति प्रमुख हुन् ।
दु:खमा पनि जीवन हुन्छ
सुख र दु:ख मान्छेको जीवनका दुई पाटा हुन् । बालकृष्ण समले लेखेका छन्, ‘दु:खीको घरमा मात्र तेरो बास हुने भए, हे ईश्वर दया राखी अझ मलाई दु:ख दे ।’ नेपालीको हकमा यो लागू भएझैं भएको छ । हरेक वर्ष नेपालीले केही न केही ठूला दु:ख भोग्नुपरेकै छ ।
अंग्रेजीको भूत उत्रेपछि
सानैदेखि प्रेम परेको ‘अंग्रेजी भाषा मोह’ ले मेरो जीवनमा निकै महत्त्व राख्छ । कक्षा ४ बाट एबीसीडी सुरु हुने सरकारी विद्यालयमा पढ्दादेखि नै मेरो पहिलो प्रेम अंग्रजी भाषासँगै परेको थियो ।
नेपाली भाषाको अन्तर्राष्ट्रियकरण
नेपाली भाषाका वक्ताहरू नेपालबाहेक भारत, भुटान, बर्मा, हङकङका अतिरिक्त विश्वका ४० मुलुकमा छरिएर रहेका छन् ।
चिया बगानको माटोमा
मेरो पनि उमेर थियोउमेरसागै सपनाहरु थिएजस्तै—बाबाआमाको आाखा छल्दै
मेरो अमेरिकन छोरा
अमेरिकामा मेरो छोराकोचिटिक्क परेको आफ्नै घर छछोराको काँधमा ब्याजको हलो अड्काएरबैंकले किनिदिएको,
म तिम्रो सहयोगी हात बन्न सक्छु ? एक जना भलाद्मी जस्ता देखिने व्यक्तिले फेसबुकमा आफ्ना तस्बिर र छोटकरी परिचयसहित सोधेका कुरा कम्प्युटर खोलेपछि देखिन् ।
पुस्तकलाई पुरस्कार : पुँजीवादी पासो
हामीले अहिले पढ्ने कुरा बजारले निर्धारण गरेको छ । बुकर पुरस्कारका निर्णायकले पुस्तकको सिर्जनशीलता र नौलो लेखाइलाई ध्यान दिँदैनन् । बजारीया शैली मात्रै हेर्छन् ।
सकसका ५६ दिन
२०७४ असार ४ गते । चितवन गीतानगरस्थित घरबाट बुबाले एकै सासमा यति कुरा भन्नुभयो, ‘लौन के गर्ने ? त त्यहाँ छस् । के कसो गर्नुपर्ने हो तुरुन्तै बुझिहाल । सकेसम्म छिटो गर्नुपर्‍यो ।’